Faritra Bongolava : manjaka ny asan-dahalo, ripaka ny omby | NewsMada
Faritra Bongolava : manjaka ny asan-dahalo, ripaka ny omby
Bongolava, faritra iray amin’ireo 22 eto amin’ny Nosy, manana ny toerany eo amin’ny toekarem-pirenena. Raha ny velaran-tany fotsiny, mirefy 17.983 km2 io faritra afovoany andrefana io, manana ny renirano Tsiribihina, miampy ny morontsiraka andrefana any Maintirano. Distrika roa ny ao aminy, Tsiroanomandidy, ahitana kaominina 18, sy Fenoarivobe, misy kaominina 8.
Mpamboly ny be indrindra amin’ny mponina 469.212 ao amin’ny faritra, mahatratra 87 %. Mamboly vary ho an’ny tsena ao an-toerana sy aondrana any ivelany. Eo ny vary “aloha”, « tsivalatao » sy « tsipala ». Manampy izany ny voly katsaka, mangahazo, tsaramaso, voanjo. Mampalaza ny faritra ny poavra mena. Tsy vitsy ny fianakaviana mivelona amin’izany karazam-boly izany, izay misy manondrana any Etazonia, Italia, Alemaina, Soisa sy any amin’ny firenen-kafa. Hita any amin’ny faritra koa ireo zavaboahary maro sy ny biby tokony harovana.
Manampy betsaka ny tantsaha amin’ny fivelomany ny reniranon’i Tsiribihina sy Manambolo, tonga hatrany amin’ny farany andrefana. Tena mampiavaka ny faritra ihany koa ny fiompiana omby. Azo lazaina fa harena iray lehibe any amin’ny faritra ny omby ary tsara ho fantatra fa ao Tsiroanomandidy ny tsenan’omby lehibe indrindra eto Madagasikara. Tsy latsaky ny 200.000 ny omby any amin’iny faritra iny, saingy mampalahelo ny asan-dahalo mandrava izany harena izany sy miafara amin’ny famonoana olona. Potiky ny dahalo ny tanàna maro any ambanivohiytra, lasa ny omby. Tsy hita ny mpitandro filaminana, toa ny dahalo indray no mitondra basy tokony hampiasain’ireo zandary ireo.
Ratsy ny lalana, potika ny tontolo iainana
Fahavoazana lehibe iainan’ny mponina any amin’ny faritra ny faharatsian-dalana. 719 km ny lalana ao amin’ny faritra ka 23 % ihany ny azo aleha amin’izany. Tena ratsy ny lalana, indrindra any amin’ny distrikan’i Fenoarivobe. Sahirana ny mponina mandavantaona, maro ny vokatra tsy tafavoaka. Potika ihany koa ny tontolo iainana, rava ny ala, miantraika any amin’ny fambolena izany rehetra izany.
Toy ny faritra maro eto amin’ny Nosy, itoviana ny aretina : ratsy ny lalana, fahasimban’ny tontolo iainana, asan-dahalo. Efa niatrika izany teo amin’ny fitondrana ny mpanohitra ankehitriny, ary ny mpitondra amin’izao fotoana izao, manana adidy mamaha ny olana. Mila ny fiaraha-miasan’ny rehetra izany, manana andraikitra tandrify azy ny tsirairay manomboka amin’ny olom-pirenena tsotra.